Sweden oo ciidamo u soo diraysa Soomaaliya si ay uga qeyb qaataan la dagaalanka burcadbadeeda - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaSweden oo ciidamo u soo diraysa Soomaaliya si ay uga qeyb qaataan la dagaalanka burcadbadeeda
Sweden oo ciidamo u soo diraysa Soomaaliya si ay uga qeyb qaataan la dagaalanka burcadbadeeda [Xigashada Sawirka: EU NAVFOR]
Garoowe-(Puntland Mirror) Soddon iyo afar askari oo katirsan ciidamada Sweden ayaa kusoo jeeda biyaha Soomaaliya iyaga oo qeyb ka ah dadaalka caalamiga ah ee looga hortagayo weerarada burcadbadeeda Soomaaliya.
Ciidamada Sweden oo ah kuwii shanaad ee howlgalka gobolka ayaa fariisin ka sameysan doona xeebta Soomaaliya, sida uu ku waramay mareegta the Local oo soo xiganaya saraakiil Sweden katirsan.
“Marka kowaad waxaanu tagi doonaa halkaas si aan u galbino gargaar caawimaad ah oo ay leedahay Barnaamijka Cunada Adduunka ee WFP oo loo wado Soomaaliya. Sidoo kale waxaanu waajibaad u leenahay in aan faragelino oo joojino weerarada burcadbadeeda iyo tuugada kale ee hubaysan,” Thomas Olsson, madaxa ciidamada Sweden ee Soomaaliya ayaa sidaas yiri.
Tirada weerada burcadbadeeda Soomaaliya ayaa hoos u dhacday sanadihii u dambeeyay balse intii lagu guda jiray sanadkan 2017 ayaa waxaa dhacay ilaa dhowr weerar.
November 18, 2019 Xubno ka socda guddiga doorashooyinka Puntland oo Nairobi kulan kula yeeshay masuuliyiin katirsan beesha caalamka
July 17, 2018 Madaxweynaha Puntland oo danjiraha Sweden u qaabilsan Africa kulan kula yeeshay Brussels